Fanavaozana ny herinandro: Spotify, Procreate ary maro hafa | Vaovao IPhone
Averina indray, tapitra ny herinandro ary amin'ny iPad News dia miverina miaraka amin'ireo fanavaozana tena lehibe indrindra amin'ity herinandro ity isika ao amin'ny App Store. Marihina fa tamin'ity herinandro ity ny faritra: "Fanavaozana" ny magazay fampiharana Apple dia tena nangina tokoa. Na izany aza, nifidy rindrambaiko sasantsasany izahay izay nohavaozina miaraka amin'ireo fiasa vaovao. Ireo no rindranasa horesahintsika ao amin'ny Fanavaozana ny herinandro amin'ity herinandro ity - mendrika ny fihoarana: Spotify, ny sehatra ampiasaina indrindra amin'ny fihainoana mozika; Miteraha, ny fampiharana ampiasaina indrindra hamoronana sary amin'ny iPad; Badland, iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny App Store; Y Jetpack Joyride, lalao iray hafa izay noresahanay tamin'ny andro lasa teo ihany koa tao amin'ny iPad News.
Araka ny efa nolazaiko, Spotify dia iray amin'ireo sehatra be mpampiasa indrindra amin'ny fihainoana mozika amin'ny ankamaroan'ny fitaovana ananantsika ao an-trano: solosaina, finday, takelaka ... Ary tamin'ity herinandro ity, dia namoaka ny kinova 0.9.1 ho an'ny iDevices:
Fanatsarana ny fitetezana IPad: Ho hitantsika ny Playlists isan-karazany ary koa, io dia ny rafitra fitetezana mitovy amin'ilay misy amin'ny fampiharana iPhone.
Araho ny namana sy ny mpanakanto: Ity dia fisehoan-javatra vaovao tsy misy afa-tsy amin'izao fotoana izao amin'ny iPad. Mamela antsika hanaraka ny namantsika sy ny mpanakanto antsika izany. Inona no azontsika amin'izany? Hita izany amin'ny feed, ireo hira henoin'izy ireo, ny sakaizany, hira vaovao navoakany (raha ny mpanakanto) ...
Fihainoana tsy fantatra anarana: Manomboka izao dia azontsika afenina izay hira henointsika mba tsy ho fantatry ny namantsika.
Fanatsarana isan-karazany sy fanamboarana bibikely
Omaly dia niresaka momba ny 2.0 version amin'ity rindranasa ity ary raha ny fahitako azy fanavaozana tena tsara dia tiako ny hamerenantsika azy indray:
Famerenana: Ny fampiharana dia nanova tanteraka ny endriny ho an'ny rafitra fikirakirana finday vaovao an'ny Apple: iOS 7 ary manohana 64 bitsazontsika atao ny mankafy amin'ny iPads vaovao.
Fikirana GPU vaovao: Procreate 2 dia nahitana vaovao Fikirana y vokatrytoy ny: Gaussian blur, fifantohana, tabataba, hue, saturation, famirapiratana, fandanjalanjana loko sy fiolahana ...
Galerie aerodynamika: Toy izany koa, ny kinova 2.0 an'ny Procreate dia miaraka amin'ny vaovao fanatsarana ny fametrahana ny antontan-taratasy izay miasa tsara lavitra ankoatran'ny a famolavolana vondrona vaovao miaraka amin'ny safidy hizarana antontan-taratasy amin'ireo vondrona noforonina tao anatin'ny fampiharana.
Kisary nohavaozina: Raha mijery ny sary famantarana Procreate ianao dia niova raha ny momba ilay kinova, eo afovoany dia manana gradient isika ary eo afovoany "pen" nohatsaraina miaraka amin'ireo gradients misy loko isan-karazany.
SDK vaovao ho an'ny borosy
Matetika aho miresaka momba ny lalao tsara indrindra amin'ny App Store, fa ho ahy dia misy lalao tsara maro azo hita ao amin'ny App Store. Iray amin'ireo tiako indrindra i Badland, lalao iray izay tsy maintsy handalovantsika ny efijery amin'ny tontolo mahafinaritra miaraka amina dragona hafa tanteraka. Ireto ny fanatsarana amin'ity fanavaozana ity:
Haavo vaovao 10 miaraka amin'ny laser
Misiona vaovao 30
Famaranana vaovao: Andro II: Ny alina
7 zava-bita azo atao vaovao
Isa sy fanaraha-maso nohatsaraina
Ary farany, hahita fanavaozana vaovao ny lalao isika Jetpack Joyride misy ao amin'ny App Store ho an'ny iDevices:
SAM: Jetpack Joyride dia manana fiarakodia vaovao antsoina hoe Super Mechanical Appendix (SAM). Mba hahazoana ity fiara ity dia tsy maintsy mahazo marika manokana telo isika isan'andro Rehefa manana ireo mari-pamantarana telo ireo isika dia afaka mifehy ny fiara, fa handefa balafomanga andiany kosa izy ireo izay hotendren'izy ireo hanoherana anay.
Valisoa: Misaotra ny SAM, ireo mpamorona ny Jetpack Joyride dia nanafina valisoa manokana azonay ampiasaina amin'ny alàlan'ny tavoahangy vitsivitsy izay ho hitantsika amin'ireo ambaratonga / lalao.
Sled: Raha niresaka momba an'i SAM isika teo aloha, dia miresaka momba ity fiara vaovao tonga any Jeypack Joyride: Sled ity isika. Amin'ny alàlan'ity fiara ity dia azontsika atao ny manamboatra azy amin'ny robot an'i Dadabe Noely. Tsy ho hita izany mandritra ny volana Desambra amin'ny alàlan'ny App-Purchase ao anaty fampiharana.
Fanatsarana ny sary famantarana Center Game
Fanazavana fanampiny - Fanavaozana ny herinandro: Dropbox, Amazon, Google Chrome ary maro hafa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fanavaozana ny herinandro: Spotify, Procreate ary maro hafa